तामाको भाँडामा राखेको पानी बिहान खालीपेटमा पिउदाँ कस्ता रोगहरुले सताउदैन् त ? - आजकोNepal
तामाको भाँडामा राखेको पानी बिहान खालीपेटमा पिउदाँ कस्ता रोगहरुले सताउदैन् त ?
संवाददाता २२ कार्तिक २०७७, 2:29 pm
एजेन्सी – भारत र नेपालमा तामाको भाँडाको निकै महत्त्व हुन्छ । तामाको भाँडालाई पूजा समेत गर्ने प्रचलन रहेको छ । भगवानको पूजाआजा गर्न होस् वा विवाह, व्रतबन्ध जस्ता पवित्र धार्मिक कार्यहरुमा प्रयोग गरिने तामाको भाँडामा राखिएको खानेकुराले शरीरलाई फाइदा समेत गर्छ ।
तामाको भाँडामा कपर अक्साइडका कारण फोहोर जम्न शुरु हुन्छ । त्यसैले पानी राख्नुअघि तामाको भाँडालाई राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ । फोहोर तामाको भाँडामा राखेको पानीले शरीरलाई बेफाइदा गर्छ